Ho an’Andriamatoa Rajoelina Andry, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara
Nanangona JRR il y a 11 mois
Maro ireo ny olona te handray anjara amin'ny ady atao amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Ny olana dia tsy mbola misy sehatra afahana maneho izany miaraka. fa samy milaza ny heviny eny rehetra eny. Na ny filoham-piangonana aza efa tsy nangatahana intsony ny heviny. Samy maneho antsisiny eny sisa azo atao tahaka ity taratasy misokatra ho an'ny Filohampirenena ity.
Noro H. Razafimamonjy il y a 11 mois